Bit By Bit - Mass iskaashi - 5.3.4 Gunaanad
Wicitaanada Open ha khubaro iyo non-khubaro badan oo xal soo jeedin in dhibaato halkaas oo xal sahlan si aad u hubiso ka badan dhalin.
In dhammaan saddex mashruuc-Netflix call furan Prize, Foldit, Peer-to-macay-cilmi-soo rogeen su'aalo ah foom gaar ah, xal baryo, ka dibna gaaray xalka ugu fiican. Cilmibaadhayaasha ayaa xitaa uma baahna in la ogaado khabiir ugu fiican si aad u weydiiso, oo mararka qaarkood fikradaha wanaagsan meelaha lama filaan ah u yimid.
Haddaba waxaa kaloo aan muujiyo karaa laba kala duwan oo muhiim ah oo u dhexeeya mashaariicda call furan iyo mashaariicda xisaabinta aadanaha. First, mashaariicda call furan cilmi qeexan gool (tusaale ahaan, saadaalinta ratings movie) halka in xisaabinta aadanaha cilmi qeexan a micro-hawsha (tusaale, kala saarista Galaxy a). Second, in wicitaanada furan cilmi doonayay qayb-u geynta ugu fiican ugu wanaagsan ee saadaalinta ratings movie, qaabeynta ugu hooseeya-tamarta borotiinka ah, ama gabal ugu haboon ee ka hor farshaxanka-ma nooc ka mid ah isku darka fudud oo dhan darsaday.
Marka la eego template guud wicitaanada furan oo saddexdan tusaalooyin, waxa noocyada kala duwan ee dhibaatooyinka cilmi bulshada waxaa laga yaabaa in ku haboon in habkan? Halkaa marka ay marayso, waa in aan qirayaa in ay jiraan ma ay tusaalooyin badan oo lagu guulaystay weli (sababo aan kuu sharxi doonaa daqiiqad). In la eego analogues toos ah, mid ka fekeri karaa in mashruuca style Peer-to-macay ah loo isticmaalo by cilmibaadhe taariikhi Boogaadin dokumentiga horeyn ku xuso qof gaar ah ama fikrad. hab An call u furan dhibaato noocan ahi waxa uu noqon karaa, gaar ahaan qiimo leh marka waraaqaha la xiriira aan laga soo ururiyey in hal archive ah laakiin waxaa si weyn loo qaybiyey.
More guud ahaan, dawladaha badan ay dhibaato u noqon kara in la furo kasteba wicitaanada, sababtoo ah waxay ku saabsan abuurista saadaasha in loo isticmaali karaa in hanuuniyo talaabo yihiin (Kleinberg et al. 2015) . Tusaale ahaan, sida Netflix doonayay in la saadaaliyo ratings on movies, dawladaha laga yaabaa in doonayaa in la saadaaliyo natiijooyinka sida oo maqaayado badan tahay in ay leeyihiin xadgudubyada code caafimaadka si ay u qoondeeyo khayraadka kormeer dheeraad ah si hufan. Hami by dhibaato noocan ahi, Glaeser et al. (2016) loo isticmaalo call furan si ay u caawiyaan ee magaalada Boston saadaaliyo xadgudubyada nadaafadda iyo fayadhowrka makhaayad ku salaysan xogta laga eegista Yelp iyo xogta kormeer taariikhiga ah. Glaeser iyo asxaabtii la qiyaaso in model ah saadaal ku guuleystay call bannaan hagaajin lahaa wax soo saarka ee kormeerayaasha makhaayad by saabsan 50%. Ganacsatada ayaa sidoo kale waxay leeyihiin dhibaato la mid ah qaab-dhismeedka sida saadaalinta middaysan macaamiisha (Provost and Fawcett 2013) .
Ugu dambeyntii, marka lagu daro in la furo ku baaqay in lug natiijooyinka ay horay u dhacday in xogta gaar ah (tusaale ahaan, saadaalinta xadgudubyada code caafimaadka isticmaalaya macluumaadka ku saabsan xadgudubyada code caafimaadka ee la soo dhaafay), mid ka fekeri karaa saadaaliyey natiijada ayaa sheegay in aan weli la dhacay qof kasta in dataset ah . Tusaale ahaan, Qoysaska aan caga badan oo waxbarashada Samaqabka Child ayaa dabagal ku saabsan 5,000 oo carruur ah tan iyo markii uu dhashay 20 magaalo oo kala duwan US (Reichman et al. 2001) . Cilmi ayaa soo aruurisay xog ku saabsan carruurta kuwaas oo, qoysaskooda, iyo deegaanka ay ka sii ballaadhan at dhalashada iyo da '1, 3, 5, 9, iyo 15 la eego dhammaan macluumaadka ku saabsan carruurta kuwaas oo, sida ugu wanaagsan ee cilmi saadaalin laga yaabaa natiijooyinka sida kuwa qalin doonaa ka kulliyadda? Ama, ka muujiyay hab u noqon lahaa dheeraad ah oo xiiso leh in cilmibaadhayaal badan, oo xogta iyo aragtiyaha noqon lahaa ugu waxtarka badan ee saadaalinta natiijooyinka? Tan iyo mid ka mid ahaa carruur, kuwaas oo hadda ku jira da'dii in aad tagtid jaamacadda, tani waxay noqon lahaa saadaaliyo mustaqbalka eegaya run oo waxaa jira xeelado badan oo kala duwan in cilmi-shaqo laga yaabaa. cilmi-A, kuwaas oo aaminsan in xaafadaha waa muhiim qaabaynta natiijooyinka nolosha laga yaabaa inay qaadato hal hab halka cilmibaadhe ah oo diiradda on qoysaska ku sameeyaan wax gabi ahaanba ka duwan. Waa kuwee mid ah wajiyadii kuwan ka wanaagsan shaqeyn doono? Annagu garan mayno, iyo in geeddi-socodka ah ee ka soo helo laga yaabaa in wax muhiim ah oo ku saabsan qoysaska, xaafadaha, waxbarasho, iyo u sinnaan la'aanta bulsho ee aan u baran. Dheeraad ah, saadaasha, kuwaas oo laga yaabo in loo isticmaalo si uu u hago xog ururinta mustaqbalka. Bal qiyaas in ay jireen tiro yar oo ka qalin jaamacad in aan la saadaalin si ay u qalin by mid ka mid ah lagu daydo, oo dadkan u noqon lahaa musharax fiican ee dabagal waraysiyo tayo iyo daawashada kaladuwan. Sidaas darteed, in noocan oo kale ah call furan, saadaasha ma ugu dambaysta, halkii, ay bixiyaan hab cusub inay is barbar dhigaan, taajir, iyo isku dhaqan teori kala duwan. Noocan ah call furan kuma saabsana oo isticmaalaya xogta laga Qoysaska Curdin ah in la saadaaliyo cidda kulliyadda tegi doonaa; waxaa loo isticmaali karaa in la saadaaliyo natiijada kasta oo ugu danbeyn la soo ururin doonaa in kasta oo xogta bulshada gaadhya.
Sida aan horeba u qoray qaybtan, halkaas ma ay tusaalooyin badan oo ka mid ah cilmi bulsheed la isticmaalayo wicitaanada furan. Waxaan u maleynayaa in tani ay tahay, maxaa yeelay, wicitaanada furan aan si fiican ku habboon in hab in saynisyahano bulshada caadi ahaan jire ah su'aalahooda. Ku soo noqoshada Prize Netflix ah, saynisyahano bulshada sida caadiga ah ma weydiin lahaa oo ku saabsan saadaalinta dhadhankii, waxay ku weydiin lahaa oo ku saabsan sida iyo sababta dhadhankii dhaqanka kala duwan oo loogu talagalay dadka ka fasalada bulshada kala duwan (Bourdieu 1987) . Noocan oo kale ah "sida" iyo "sababta" su'aasha ma keeni in ay fududahay in la xaqiijiyo xal, oo sidaas daraaddeed u muuqdaan kuwo si liidata taam u yahay inuu furo wicitaanada. Sidaas darteed, waxa ay u muuqataa in wicitaanada furan yihiin more kasteba su'aasha of saadaasha badan su'aalo ah sharaxaad; waayo badan oo ku saabsan farqiga u dhexeeya saadaasha iyo sharaxaad arki Breiman (2001) . Aragtiyaha Recent, si kastaba ha ahaatee, ayaa ugu baaqay bulshada in ay dib u saynisyahano boglaynta u dhexeeya sharaxaad iyo saadaasha (Watts 2014) . Sida line u dhexeeya saadaasha iyo sharaxaad blurs, waxaan filaynaa in tartanka furan noqon doonaa kordheysa caadi ah ee cilmiga bulshada.